IC kadhi yakabhadhara magetsi ekutengesa system Instruction
na admin on 20-06-02
Chikamu 1: General chirongwa 1.Background Iyo Logistics system yakakura system management. Management yekushandiswa kwemagetsi mumabhizinesi, dzimba dzekugara nemafurati chinhu chakakosha pazviri. Kubira magetsi, magetsi anokwakuka, uye kuwanda kwemagetsi mumabhizinesi, dzimba dzekugara, ...
Iko kutarisira kweramangwana kwemagetsi emagetsi ekubhadhara
na admin on 20-06-01
Nekukurumidza kusimudzira munharaunda, chigadzirwa chinonzi prepaid simba metres chave kutorwa, iyo isingori chete nekudzora magetsi emagetsi evashandisi mune mamwe matunhu, asi zvakare inopa kuve nyore kwesimba remagetsi uye panguva imwecheteyo zvirinani kuchengetedza simba. Zvino, chii ...
kushandiswa kwesimba kutarisa "muridzi wemba"
Iye zvino makambani ari kuyedza nzira dzakasiyana siyana dzekushandisa simba ravo nekudzikisa mari yekugadzira. Semuenzaniso, masimba echinyakare anoshandisa nzira dzemanyorero kutevedzera nekugadzirisa, ayo ane matambudziko akadai sekusashanda kusawirirana, kushaya nguva, uye kuomarara mukutonga. Inogona sei-nguva chaiyo ...